Showing १-१० of १,०८५ items.
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको वैकल्पिक उपायहरू
पछिल्लो समयमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढेको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै थला पार्ने काम भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा गराउने र मुद्रास्फीति गराउने यो प्रमुख कारकमध्ये एक बनेको छ । जब भौतिक विकास उत्कर्षमा पुग्यौं, तब यो वस्तु अपरिहार्य बन्दै गयो । हाम्रो देशमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खानी त छ तर, उत्खनन् गर्दा मुनाफा हुन नसक्ने हुनाले र प्राविधिक व्यवधान भएको हुनाले उत्खनन् हुन नसकेको बुझिन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य वृद्धि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको प्रारम्भिक मूल्य तथा वित्तीय संस्थाहरूले सिर्जना
प्रकाशित मितिः असार २०, २०७९
–ज्ञान बायुङ राई (सेचोचा)
यसकारण महत्वपूर्ण छ रक्तदान
कुनै पनि स्वस्थ व्यक्तिले स्वतःस्फूर्त आफ्नो शरीरमा भएको रगतलाई दान गर्ने प्रक्रियालाई रक्तदान भनिन्छ । कुनै पनि कारणबाट शरीरमा चाहिने मात्राभन्दा धेरै कम अथवा ७ प्रतिशतभन्दा कम रगत भएमा उक्त व्यक्तिलाई रगत दिनुपर्ने हुन्छ । निम्न लिखित विभिन्न अवस्थामा बिरामीहरूलाई रगत दिनुपर्ने हुनसक्छ ।जस्तैः दुर्घटनाबाट अत्यधिक रक्तस्राव भएमा, डेलिभरीको समयमा, सर्जरीको समयमा, क्यान्सर रोगीलाई, सिकलसेल एनिमिया, थेलेस्मिया भएको बेला अथवा अन्य कारणले शरीरबाट अत्यधिक रक्तस्राव भएमा । संसारमा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै आविष्कार भए पनि कृत्रिम रगत भने बनाउन सकिएको छैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई रगत दिनुप
प्रकाशित मितिः असार १६, २०७९
डा. खगेन्द्र ओली
स्वतन्त्रदेखि स्वतन्त्र पार्टीसम्म
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा केही पालिकाहरूमा अनपेक्षितरूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बाजी मारे । यसले राष्ट्रिय राजनीतिक वृृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण वा हेराइहरूमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । सकारात्मक तथा नकारात्मक टिका–टिप्पणीहरूले अर्थराजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ । यसले स्थापित सिङ्गो सामाजिक भाष्य वा मनोविज्ञानहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । राजनीतिप्रति एकाएक स्वार्थगत आकर्षण बढाएको छ । सबैमा मनोगत एवम् भावनात्मक महŒवाकाङ्क्षा जगाएको छ । यो सुखद् पक्ष हो ।यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय स्वतन्त्र पदावली असाध्यै चर्चामा रहेको छ । यद्यपि वस्तुतः वर्गसमाजमा निरपेक्ष स्वतन्त्र भन्ने व
प्रकाशित मितिः असार १५, २०७९
एकाधिकार वित्तीय पुँजीः अर्थतन्त्रको सङ्कट !
विषय प्रवेश:विश्वमा धनी देश, धनी मानिस र गरिब देश, गरिब मानिसबीचमा डरलाग्दो आर्थिक अन्तर सङ्कट बढिरहेको छ । ‘सन् १९६० मा धनी–गरिबबीचको भिन्नता अनुपात १ः३० थियो । सन् १९९४ मा बढेर त्यो अनुपात १ः७८ हुन पुग्यो’ (बिन्नेट २००१ हेर्नुहोस् ।) यसको प्रभाव नेपालमा पनी पर्न गयो । वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारण देशमा दलालपुँजीवाद उग्र हुन पुग्यो । यसले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय पुँजी निर्माणको ग्यारेन्टी हुन सकेन । कुशासन, अनुत्पादक लगानीका कारण सिर्जित यो आर्थिक सङ्कट एकाधिकार वित्तीय पुँजी जिम्मेवार छ । जसको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा रह्यो । ब्याजी एकाधिकार वित्तीय पुँजी विकल्पमा उत्पादन र भौतिक पु
प्रकाशित मितिः असार १३, २०७९
लिम्बू लोकछन्दको अन्वेषण
१. पृष्ठभूमिलिम्बू जातिको दर्शन ‘मुन्धुम’ हो । कविवर वैरागी काइँलाका अनुसार ‘लिम्बू जातिको मौखिक परम्परागत श्रुतिशास्त्र (मुन्धुम) भित्र लिम्बू जातिका पुरोहित फेदाङ्मा, साम्बा तथा येबाहरुले अनादिकालदेखि नै ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, पृथ्वीको सृष्टि, मान्छे तथा चराचर जगत्का सृष्टिका आख्यानहरु गाउँदै आएका छन् । यसरी तिनले ती आख्यानहरुलाई हराउन नदिई जोगाएका पनि छन् । यिनै आख्यानहरुको सँगालो÷समष्टिलाई मुन्धुम भनिन्छ ।’ मुन्धुमअनुसार जुन दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर तागेरा निङ्वाभुमाङले सुली र खरानीले सृष्टिको पहिलो मानिस बनायो र ‘हाऊ’ भनेर बोलाउँदा ‘हाऊ’ भनेर बोल्यो, त्यसरी मानवले सर्वप्रथम वाणी पायो । त्यस
प्रकाशित मितिः असार ४, २०७९
नगर प्रमुख हर्कराज साम्पाङका अवसर र चुनौतीहरू
धरान नगरको विकास २०३८÷०३९ सालतिर सुरु भएको हो भन्ने स्व. भूपालमानसिंह कार्कीको भनाइ थियो । धरान नगरमा नगरपिता बनेका हर्कराज साम्पाङ राईलाई केही पत्रिकाहरूले ‘भूईं मान्छे’ पनि लेखे । कारण उनले धरानको जमिनलाई ढोग्दै गरेका तस्बिरहरू पनि फेसबुकमा देखाइएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर राईले १६ हजार ५९ र एमालेकी मञ्जु भण्डारी सुवेदीले १२ हजार ८ सय २५ को विरुद्धमा २० हजार ८ सय २१ मत ल्याई धरान नगरको नगरपिताको कुर्र्सीमा आसिन हुन सफल भए । धरानलाई २००८ सालदेखिको लालकिल्ला ठान्ने एमाले र गठबन्धनले जित्छौं भन्ने काङ्गे्रसजस्ता ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारलाई चमत्कारी ढङ्गले पराजित गर्न सफल
१२४ पटक पढिएको
नेपालः युक्रेनकै दिशामा जाने खतरा
अमेरिका र रुसबीचको अन्तरविरोध नयाँ होइन । यो तत्कालीन सोभियत समाजवादी जनगणतन्त्र सङ्घ अस्तित्वमा रहँदादेखि नै जारी विवाद हो । अर्थात् अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो पुँजीवादी र समाजवादी धुरीबीचको लडाइँ थियो । यस अतिरिक्त यो विश्वमहाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा थियो । यद्यपि इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा उनीहरूबीचको सम्बन्धले कहिले आक्रामक र रक्षात्मक मोड लिँदै आएको देखिन्छ । यही सिलसिला अन्तर्गत पछिल्लो समय रुस र अमेरिकाबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको छ । युक्रेनले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोजेसँगै रुसले युक्रेनमा हमला गर्नु यही तिक्तताको अर्थराजनैतिक अभिव्यक्ति हो भन्दा दुईमत नहोला । दुःखका साथ
प्रकाशित मितिः असार १, २०७९
इटहरीको पर्यटनमा युवाहरूको दायित्व, सम्भावना र चुनौती
पर्यटन समृद्धिको आधार हो । यसमा अब हामी कसैको शङ्का छैन । कोभिडपछिको हाम्रो आर्थिक अवस्था र वर्तमान मुलुकको खराब आर्थिक सङ्कटले पनि हामीले पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाउनै पर्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ । मुलुक क्रमशः आयातमुखी मात्र भइरहेको छ । विप्रेषण र वैदेशिक सहायता अनि ऋणको रकमको सबै हिस्सा हामी आयात गर्नमै खर्चिरहेका छौं । यो परिस्थितिमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि पर्यटन नै दिगो आधार बन्न सक्ने आँकलन गरिन्छ । पर्यटनको तल्लो तहका जनतादेखि ठूला लगानीकर्ता र मुलुकले एकैचोटी प्रत्यक्ष उपलब्धि लिन सक्ने भएकोले अनि स्वरोजगार बढ्न सक्ने र विदेशिने क्रम घट्दै
इन्धन मूल्य वृद्धिको विरोध औचित्यहीन
कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको कारोबार हुनु साधारण प्रक्रिया हो भने कुनै पनि देशको वस्तु तथा सेवा अर्काे देशसँग आयात तथा निर्यात गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो ।नेपाल भूपेरिवेष्ठित देश हो । नेपाल गरिब होइन, बरु गरिब बुद्धि भएका निश्चित व्यक्तिहरूले देशलाई गरिब बनाएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा करिब २ सय ५० वर्ष अगाडिसम्म यो देश यस्तो गरिब देश थिएन । पछिल्लो कालमा पश्चिमी मुलुक, पूर्र्वीय मुलुक र एशियाली देशहरूले ठूलो भौतिक विकास गरे तर, नेपाल नियोजित तवरले आवश्यकीय विकासको पूर्वाधारदेखि विमुख बन्दै गयो । तथ्याङ्कअनुसार त्यसको परिणाम आज संसारमा भएका देशहरूमध्ये नेपाल एक प्रमुख गरिब मुलुक भनेर परिचित छ
ज्ञान बायुङ राई (सेचोचा)
चेक अनादर विषय एकः कानूनी उपचार र फैसला अनेक
प्रायः गरेर हिजोआज व्यक्तिहरूले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शिता बनाउन, छिटोछरितो एवम् सरल बनाउन तथा लेनदेनको व्यवहारलाई कानूनी रूपले वैध बनाउन चेकमार्फत् आर्थिक कारोबार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा आर्थिक अपराधका घटनामा पनि दिनानु दिन बढोत्तरी भई चेक अनादर, ठगी, बैङ्किङ कसुर, लेनदेन नामक आर्थिक अपराध वृद्धि भइरहेकोमा चेक अनादर एउटा विषय भए पनि कानूनी उपचारका पाटाहरू धेरै भएकोले केही जटिलता र न्यायको कसीमा समरूप छैनन् । फलतः कुन बाटो अपनाउँदा सहज हुन्छ भन्ने जवाफमा पनि आम जनमानसमा स्पष्टता छैन । के हो चेक अनादर ?सामान्य भाषामा बुझ्दा खातामा रकम नभएमा वा भए पनि अपुग छ भन्ने जा
प्रकाशित मितिः जेठ २७, २०७९
१२६ पटक पढिएको